अब गर्मी बढे सँगसँगै राेगहरू पनि बढ्छ, गर्मीयाममा लाग्ने रोगबारे जानी राखौं ! - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it ‘सिस्नु’ प्रकृतिको एउटा बरदान हो, जसले च्वाट्टै पार्छ यी रोगहरु ! जान्नुहोस !
Up Next किन आउछ शरीरमा मुसा, कसरी हटाउने ?
कसरी आँखालाई धुलो बाट जोगाउने
कतिपयको आँखामा सुख्खापन धुलोका कारण हुने गरेको पाइएको छ । आँखामा सुख्खापन भएर उपचार गराउनु भन्दा पनि यसलाई हुनै नदिनु…
इन्टरेनटमा गजब गजबका कुराहरु पाइन्छन् । केहि समय अगाडी नेपालीहरुमा टेस्टोनी एपको खुब चर्चा थियो । भाषामा असभ्य र बताउँने…
१. ग्रीन टी ग्रीन टि एन्टिअक्सिडेन्टको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो । पेट सफा राख्न, रगतको शुद्धिकरणका लागि समेत ग्रीन टि…
महिनावारीको क्रममा के गर्ने पुरुषले ? जान्नुहोस
व्यायाम गराउनुहोस्ः हल्काफूल्का व्यायाम वा योगाबाट पेट र ढाड दुखाईबाट राहत प्राप्त हुन्छ । धेरैभन्दा धेरै पानी पिउन लगाउनुहोस्ः…
१. मोटोपना बढ्नेछः मोटोपना र धेरै समयसम्म सुत्नुका बिच सम्बन्ध छ । यदि तपाईं लामो समयसम्म सुत्नुहुन्छ भने तपाईंको शरिर…
घामको बिकिरणको खतरा र बच्ने तरिका
बेलायतको अखबार ‘डेली मेल’ले एउटा रिपोर्ट प्रकासित गरेको छ, जसमा सूर्यको सोझो किरणको प्रभाव कति हानिकारक हुन्छ भन्ने तथ्य उल्लेख…
फर्सी खादा शरीरमा यस्ता फाइदा हुन्छनु, जान्नुहाेस्
फर्सी बिशेष गरी तरकारी पकाउन तथा सलाद बनाउन प्रयोग गरिन्छ । यसमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए, फलाम, फाइबर लगायत बिभिन्न…